Forex စျေးကွက်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ဘယ်လိုကုန်သွယ်မှုလုပ်မလဲ။
Forex Market ဆိုတာဘာလဲ။ ၂၀၂၁ ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်မလဲ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19 မေလ 2022
Forex စျေးကွက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးလူသိများသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်လကုန်သည်များကိုလစဉ်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်သူများအားကတိပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
အမှန်မှာကုန်သည်များအားအလွယ်တကူနေထိုင်နိုင်စေမည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်ဤလှောင်ပြောင်သောတောင်းဆိုမှုများသည်မခိုင်မာပါ။ ကြွယ်ဝသောကုန်သွယ်မှုရရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမရှိပါ၊ ၎င်းကိုလုပ်ရန်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိသောနည်းလမ်းလည်းမရှိပါ။
သို့သော် Forex စျေးကွက်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အောင်မြင်မှုရရှိရန်နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့သောသုတေသနနှင့်စာဖတ်ခြင်းလမ်းညွှန်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းရှိသည်မှာသေချာသည်။
စျေးကွက်ကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် တစ်ကြိမ်လျှင် လ သို့မဟုတ် နှစ်များစွာ ကြာနိုင်ပြီး၊ အချက်ပြမှုများနှင့် စက်ရုပ်များကဲ့သို့သော ဖြတ်လမ်းများ (သို့) Forex Market တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုလုံးကို ပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
ဒီစာမျက်နှာမှာ Forex စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲနှင့်သင်မည်သို့ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ Forex order အမျိုးအစားများ၊ မျှော်လင့်ရမည့်အခကြေးငွေများ၊ သင်၏ forex trading အန္တရာယ်ကိုလျော့ပါးစေရန်သင်ကြားသောမဟာဗျူဟာများနှင့်ဆန်းသစ်သောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုလေ့လာပါလိမ့်မည်။
Forex market သည်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဈေးကွက် (သို့မဟုတ် FX) စျေးကွက်ဖြစ်ပြီးသင်ကြားသိရသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်လည်း ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောရလျှင် – forex စျေးကွက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ပွဲစားများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ hedge funds နှင့် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ငွေကြေးများကို နေ့စဥ်ဝယ်ယူရောင်းချသည့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် လူများသည် 'ငွေလဲနှုန်းအတွဲ' အဖြစ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ငွေကြေးများကို ပြောင်းလဲနေကြသည်။ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ (ဗြိတိသျှပေါင်/အမေရိကန်ဒေါ်လာ)။ ဤထောက်ပံ့မှုနှင့် ဝယ်လိုအားက ညွှန်ပြသည်။ ဝယ်ခြင်း စျေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချ ငွေကြေးဈေးကွက်၏စျေးနှုန်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်စျေးကွက်တည်ငြိမ်စေရန်ကူညီသည်။
Forex သည် အတိုးနှုန်းများသာမက နိုင်ငံတကာငွေကြေးများကိုပါ ကာကွယ်ရန် အသုံးချနိုင်သည်။ Forex ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းများမှတဆင့် ရှိပါသည်။ ETFs၊ရွေးချယ်ခွင့်စာချုပ်များ၊ လောင်းကစားခြင်းပျံ့နှံ့၊ အနာဂတ်စာချုပ်များ၊ နှင့် CFDs.
ကြီးကြီးမားမား FX အတွဲများတွင် 1:30 အထိရှိသော Forex CFD များကို အသုံးချနိုင်ပြီး အဓိကမဟုတ်သော FX အတွဲများတွင် 1:20 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွဲများ၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဤစာမျက်နှာတစ်လျှောက်လုံးကြားရှိအရာအားလုံးကို ဖုံးကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုသင် Forex စျေးကွက်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်လာပြီဆိုပါက၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့ကုန်သွယ်ရမည်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်နိုင်သောအတွဲများနှင့်မတူညီသော Forex Trading အမိန့်များပါဝင်သော Forex စျေးကွက်၏အခြေခံများနှင့်စတင်ကြပါစို့။
ကုန်သွယ် Forex Pairs
အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်စိတ်ဝင်စားပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွက်မည်သည့်အတွဲများဝယ်ယူမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရွေးချယ်သူပွဲစား၏ကမ်းလှမ်းမှုများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သော်လည်းသင်၏မျက်လုံးကျယ်ကျယ်ဖြင့် Forex စျေးကွက်သို့သွားရန်အရေးကြီးသည်။
၎င်းသည်သင်၏ရှေ့မှောက်၌အဘယ်အရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Forex trading အကျိုးစီးပွားများမည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွက်ချက်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုငွေကြေး pair တစုံဟာငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့်အတူပါရှိသည်။ Forex စျေးကွက်၏သဘောသဘာ ၀ အရအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်နေ့တစ်လျှောက်လုံးပိုင်ဆိုင်မှု၏ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ ဤနှုန်းသည်အတက်အကျရှိသည်။ တိုတောင်းသောကာလ၌ FX pair တစုံ၏စျေးနှုန်းသည်တက်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လား၊ မခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
ယူရိုကို US ဒေါ်လာနဲ့ လဲလှယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရအောင်။
Forex လောကတွင် ဤအတွဲကို EUR/USD အဖြစ် ပြသသည်။
စာရေးချိန်မှာ ဈေးနှုန်းက 1.17 ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရည်မှန်းချက်မှာ အတွဲ၏ ငွေလဲနှုန်းသည် 1.17 အထက် သို့မဟုတ် XNUMX အောက်သို့ မြင့်တက်လာမည်ကို ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့မကြာမီပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက် Forex စျေးကွက်အမိန့်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားကြသည်။ ပထမ ဦး စွာမတူညီသောအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့၊ ဗိုလ်မှူး အားလုံးအတွက် အသေးအဖှဲ အတွဲများနှင့် တိုင်းတပါးမှယူဆောင်ခဲ့သော အားလုံး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံး FX အတွဲများအကြောင်းပြောခြင်းဖြင့်စတင်မည် ဗိုလ်ကြီး.
အဓိကအတွဲများကို အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် ယူရို၊ ဗြိတိန်ပေါင်၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ဂျပန်ယန်းကဲ့သို့သော အဓိကငွေကြေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဓိက FX အတွဲများအားလုံးတွင် USD ပါဝင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ US dollar သည် ကမ္ဘာ၏ 'ကျောက်ချခြင်း' (သို့မဟုတ် reserve) ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမည်ဖြင့်မလှည့်စားပါနှင့်၊ အသေးစား Forex အတွဲများသည်အရေးမပါလှသောအရာများဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤအတွဲများသည် Forex စျေးကွက်တွင်အကြီးအကျယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး ၂ အမြဲတမ်းပါ ၀ င်သည် ဗိုလ်ကြီး အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောငွေကြေးအဖြစ်။
အဘယ်အရာကိုသတ်မှတ် အရွယ်မရောက်သေးသူ မှခွဲပြီး ဗိုလ်ကြီး ဒီအတွဲတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဘယ်တော့မှမထည့်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
EUR/AUD – (ယူရို/ဩစတေးလျဒေါ်လာ)။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုတွင်ထူးခြားသောငွေကြေးအတွဲများရရှိနိုင်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဤအတွဲများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းထားလိမ့်မည် ဗိုလ်မှူး FX ငွေကြေးနှင့်ထွန်းသစ်စငွေကြေးတစ်ခု။
ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များတွင်မက္ကဆီကန်ပီဆို၊ တူရကီ lira၊ ထိုင်းဘတ်၊ ဥရုဂွေး peso နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာသတိပြုရန်မှာ exotic forex အတွဲများသည်ဖော်ပြပါငွေကြေးအတွဲများထက်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပြန့်ပွားမှုများရှိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့မကြာမီအသေးစိတ်အတွက်ပြန့်ပွားဆွေးနွေးရန်သွားကြသည်။
EUR/TRY (ယူရို/တူရကီ Lira)။
GBP/ZAR (ပေါင်စတာလင်/တောင်အာဖရိက Rand)။
မှတ်ချက် - နော်ဝေခရွန်ကိုထူးခြားသောအတွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုအထက်ပါစာရင်းမှသင်သတိပြုမိနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောစီးပွားရေးမူဘောင်၏နောက်ကွယ်တွင်ခရိုကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်မှာမှန်သော်လည်း၊ ငွေကြေးသည်ကမ္ဘာ့စင်မြင့်တွင် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်းမရှိချေ။
အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါက၊ အသေးအဖှဲ နှင့် ဗိုလ်မှူး ငွေကြေးအတွဲ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရန်ပိုမိုတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ထူးခြားချက်တွေထက်ထူးခြားချက်တွေ၊ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သူတို့ကအသစ်များကလေးများအတွက်ပိုပြီးသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
ယခုလက်ရှိ Forex pair တစုံအမျိုးအစားများကိုဆွေးနွေးပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောအမိန့်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်သင့်သည်။ အမှာစာများသည်ကုန်သွယ်မှု၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မရှိဘဲသင်၏ပွဲစားသည်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex pair တွင်မည်သည့်နေရာတွင်လုပ်ဆောင်လိုသည်ကိုမသိပါ။
မည်သည့် Forex စုံကိုသင်ရောင်းဝယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပါကထိုအတွဲ၏စျေးနှုန်းကိုမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားရန်သင်မျှော်လင့်ကြောင်းခန့်မှန်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်တစ်နေရာ၌ထားရန်လိုအပ်သည် ဝယ်ခြင်း အမိန့်တစ်ခုသို့မဟုတ် ရောင်းချ အမိန့်။ ဒီအမှာစာကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုတာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
သင်သည် GBP/USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဤအတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်း တက်လာမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပါ ဝယ်ခြင်း သင်၏ပွဲစားနှင့်အမိန့်။
တစ်ဖက်တွင်၊ GBP/USD သည် တန်ဖိုးကျဆင်းမည်ဟု သင်ယုံကြည်သည်ဆိုပါစို့။
ဒီကိစ္စမှာသင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ် ရောင်းချ အမိန့်။
ဒါပဲ။ သင်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ခွာသည်အထိသင်၏အနေအထားရှိနေမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝယ်ခြင်း အမိန့် - သင်တစ် ဦး ကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ဖို့ရန်လိုအပ်သည် ရောင်းချ အမိန့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအပေါ်လာမည့်အမိန့်ဖြစ်ကြသည် ကန့်သတ် အမှာစာနှင့် ဈေးကွက် အမှာစာများ။ ဤသည်မှာအခြေခံအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှုကို ၀ ယ်လိုသည့်စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
သင်မည်သည့်အချိန်၌အသုံးပြုမည်ကိုဥပမာတစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့ ကန့်သတ် အမိန့်:
သင်သည် EUR/USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
စျေးနှုန်းသည် လက်ရှိတွင် 1.10 ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်သည် 1.12 သို့ရောက်သည်အထိ ကုန်သွယ်မှုကို မ၀င်ချင်ပါ။
အဲဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ ကန့်သတ် 1.12 အတွက်အမိန့်။
သင်၏ပွဲစားသည်ဤအမိန့်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင် EUR / USD သို့ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
အခုဘယ်လိုပုံပြမလဲ ဈေးကွက် အမှာစာကိုအသုံးပြုသည်။
ယူရို / ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာရှိသည် ဝယ်ခြင်း 1.15 ၏စျေးနှုန်း။
အလားအလာရှိသော ရေတိုကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းကို ဖမ်းဆုပ်ရန် သင့်အမိန့်ကို ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်စေလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ပွဲစားသည် သင်၏မှာယူမှုကို လာမည့်ရရှိနိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဥပမာတွင်၊ သင့်မှာယူမှုကို 1.15 အထက် သို့မဟုတ် XNUMX အောက်သာရှိသော စျေးနှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ငွေကြေးအတွဲစျေးနှုန်းများသည် တစ်စက္ကန့်မှ စက္ကန့်အလိုက် ရွေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Lတုပ အထူးသဖြင့်အမှာစာများကိုအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကပုံမှန်အသုံးပြုသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်နေရာတစ်ခုကို ၀ င်နိုင်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန့်ပွားမှုဟာကွာခြားချက်ပဲ ဝယ်ခြင်း စျေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချ ငွေကြေးအတွဲ၏စျေးနှုန်း။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှသင်မည်မျှအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အတွက် 'ပြန့်ပွားခြင်း' သည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုကိုးကားသောအခါကွဲပြားသောဈေးနှုန်းနှစ်ခုကိုပြလိမ့်မည် ဝယ်ခြင်း စျေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချ စျေးနှုန်း။ ထိုစျေးနှုန်းများအကြားခြားနားချက်ကို 'pips' ကျနော်တို့ကအခိုးအငွေ့ရှင်းလင်းရန်, လာမည့်အသေးစိတ်အတွက် pips ကိုဖုံးလွှမ်းသွားကြသည်။ ပြီးနောက်, Forex စျေးကွက်အတွက်ကုန်သွယ်သည့်အခါသင်စကားလုံးအများကြီး pips မြင်လိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ပျံ့နှံ့မှုသည် သင့်ပွဲစားသည် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးရန်အတွက် ငွေအနည်းငယ်ရှာနိုင်ပုံဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Skilling၊ Capital.com နှင့် eToro ကဲ့သို့သော ကော်မရှင်အခမဲ့ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာယူဆချက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကို အသုံးပြု၍ ပြန့်ပွားမှုမည်သို့လက်တွေ့ကျပုံကိုအောက်တွင်ဥပမာပြပါ။
သင်သည် EUR/USD အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေပါသည်။
မင်းရဲ့ပွဲစားကမင်းကိုကိုးကားခဲ့တယ် ဝယ်ခြင်း 1.171 ၏စျေးနှုန်း8.
အဆိုပါ ရောင်းချ စျေးနှုန်း 1.171 ဖြစ်ပါတယ်6.
EUR / USD အပေါ်ပျံ့နှံ့သည်2pips ။
သင်၏ EUR / USD ကုန်သွယ်မှုကိုမအောင်မမြင်ဖြစ်စေရန်သင်သည် pips ၂ ခုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအရာသည်သင်အမြတ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းမည်သည့်စုံတွဲပေါ်တွင်မဆိုပျံ့နှံ့ခြင်းကသင်သည်အနီရောင်ဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုစတင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီမှာအနီရောင် ၂ ခုပါလိမ့်မယ်။ သင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမှထွက်ခွာသောအခါတွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကပြန့်ပွား၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြပြီးပြီနှင့် Forex စျေးကွက်ထဲမှာတိုင်းတာကြောင်းသင်ပြောခဲ့တယ် pips။ အခုဘာကိုရှင်းပြရမလဲ pips တကယ်ရှိပါတယ်။ Pips များသည်ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျကိုမည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဒီဟာကိုတစ်စက္ကန့်မှတစ်စက္ကန့်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးပြီ။
သငျသညျသတိထားမိကြလိမ့်မယ်, ငါတို့အထက်ပါဥပမာအပေါ် ပျံ့နှံ့ ငါတို့ကဒ/မ ၄ နေရာအဖြစ် EUR / USD ကိုပြခဲ့တယ်။ အကြောင်းမှာ FX အတွဲများအားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဥပမာ4အစားမင်း 1.17 ကိုကိုးကားလိမ့်မယ်။
GBP / USD ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ pair တစုံအဖြစ် သုံး၍ pips သည်ကုန်သွယ်မှုကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဥပမာတစ်ခုပေးပါရစေ။
GBP / USD ကို ၁.၃၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်13 ။
၂ နာရီအကြာတွင်တူညီသောအတွဲသည် ၁.၃၀ ဖြစ်သည်03 ။
GBP / USD ၏တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့သည် 10 pips ။
မင်းရဲ့လောင်းကြေးက $100 လို့ ဆိုကြပါစို့။
သင်၏အရှုံးသို့မဟုတ်အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ x) ဖြစ်လိမ့်မည် 10 pip)။
ဘ ၀ ၌စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအများစုအတွက်ချွင်းချက်ရှိသည်။ ဒdecimalမအချက် ၄ ခုတွင်ကိုးကားထားသော Forex အတွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ချွင်းချက်မှာဂျပန်ယန်းဖြစ်သည်။ JPY သည်ဒtheမပြီးနောက်4ဂဏန်းဖြစ်သည် - ဥပမာ၊2။
Forex Trading ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်များ
သင်၏ bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်ကိုတိုးတက်စေရန်သာကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏စွန့်စားမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏အရင်းအနှီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်လာသောအခါကုန်သည်များအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအမိန့်များနှင့်ကိရိယာအချို့ရှိသည်။
မင်းရဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေမှာ leverage က ဘယ်လောက်ထိပါဝင်နိုင်သလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင် – နဲ့ အချို့သော ပျက်စီးမှုကန့်သတ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်သလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ရပ်တန့်-အရှုံး နှင့် အမြတ်အစွန်း အမိန့်။
သြဇာရှိခြင်းသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များစွာအတွက် Forex စျေးကွက်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်၏တကယ့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းရန် သြဇာ Forex trading sites အများစုမှသင့်အားကမ်းလှမ်းပြီးသင့်အကောင့်ရှိငွေထက်သင်ပိုမိုရန်ပုံငွေဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်ရှင်းပြရအောင် - သြဇာသည်ချေးငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင်၏သြဇာမြင့်လေလေ၊ သင်၏အမြတ်အစွန်းများလေလေ၊ ဒင်္ဂါး၏အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းသင်၏ဆုံးရှုံးမှုသည်များများစားစားဖြစ်သည်။
Forex နှင့်ပတ်သက်လျှင်လိုင်စင်ရပွဲစားများသည်ဗြိတိန်၊ ဥရောပနှင့်မကြာမီဖြစ်မည့်သြစတြေးလျရှိလက်လီဖောက်သည်များကိုသာခွင့်ပြုထားသည်။ ဗိုလ်မှူး FX အားလုံးအတွက်နှင့် 1:20 အပေါ် ထူးခြားချက် နှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူ.
သင်သည် GBP/USD အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေပါသည်။
ဤအတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 1.3520 ဖြစ်သည်။
သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်တွင် $500 ကျန်ရှိပါသည်။
သင်ဖန်တီးသည် ဝယ်ခြင်း 1:30 leverage ကို အသုံးပြု၍ မှာယူပါ။
4 နာရီကြာပြီးနောက် GBP/USD သည် 1.3790 ဖြစ်သည်။
GBP/USD တန်ဖိုး 2% တက်လာသည်။
သင်ဖန်တီးခြင်းဖြင့် သင့်အမြတ်ငွေကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ရောင်းချ သင်၏ပွဲစားနှင့်အမိန့်။
သင်သြဇာမသက်ရောက်ပါကကုန်သွယ်မှုကသင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၀ (ဒေါ်လာ ၅၀၀ + ၂%) ရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကသြဇာသက်ရောက်မှု ၁:၃၀ ကိုအသုံးချတဲ့အတွက်မင်းရဲ့အမြတ်အစွန်းတွေများလာတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိမိသည်နှင့်အမျှသြဇာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဘယ်မှာလဲ ရပ်တန့်-အရှုံး နှင့် အမြတ်အစွန်း အမိန့်နေရာလေးကိုအတွက်လာနိုင်ပါတယ်။
လျော့ပါးသက်သာစေသောအန္တရာယ် - Stop-Loss Orders
ယခုအချိန်ထိကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်းအားဖြင့်ယခုကဲ့သို့သောအမိန့်များကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည် ဝယ်ခြင်း နှင့် ရောင်းချ, ဈေးကွက် နှင့် ကန့်သတ် အမိန့်။
အခုသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအရပြောရရင် - ရပ်တန့်-အရှုံး မည်သည့်ထပ်မံဆုံးရှုံးမှုကိုမဆိုရှောင်ရှားရန် - အမိန့်များသည်သင့်ကုန်သွယ်မှုအားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချက်တစ်ခုမှထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဘယ်အချိန်မှာaဥပမာကိုအောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ် ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်ကို Forex ကုန်သွယ်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်သည် CAD/AUD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
သင်အရေးယူသည် ဝယ်ခြင်း 1.0710 မှာ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
2% ထက် ပိုမဆုံးရှုံးချင်ပါ။
၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်ပြုလုပ်ပါ ရပ်တန့်-အရှုံး 1.0495 မှာ မှာယူနိုင်ပါတယ်။
CAD/AUD တန်ဖိုးသည်2သို့ 1.0281 နာရီအကြာတွင် ကျဆင်းသွားသည်။
ဒါဟာ 4% ဝန်းကျင်စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မင်းရဲ့ပွဲစားကမင်းကိုကွပ်မျက်လိုက်တယ် ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်အတိုင်း 1.0495 ဖြင့် မှာသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ 4% ဆုံးရှုံးမည့်အစား 2% သာ ဆုံးရှုံးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အကျိုးအမြတ်အတွက်အလိုအလျောက်သော့ခတ်ပါ - အမြတ်ယူပါ
Stop-loss အမိန့်များကဲ့သို့ပင်၊ အမြတ်ယူသောအမိန့်များသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ နေ ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်ကသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျော့ပါးစေပါတယ်။ အမြတ်အစွန်း အမိန့်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်အတွက်သော့ခတ်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီဟာကဥပမာတစ်ခုပါ အမြတ်အစွန်း အခြားမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ကုန်သွယ်မြင်ကွင်းထဲမှာအမိန့်:
CAD/AUD ကို အကြာကြီး လျှောက်သွားတဲ့အခါ မင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်က 4% အမြတ်ရဖို့ပါ။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပါ အမြတ်အစွန်း တစ်စုံ၏စျေးနှုန်းထက် 4% အတွက်အမိန့်။
ထိုစျေးနှုန်းကိုရောက်ရှိသွားပါကသင်၏ပွဲစားသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုစီရင်မည် အမြတ်အစွန်း သင့်အမြတ်ငွေ 4% ကို သော့ခတ်ရန် အမိန့်ပေးသည်။
သင့်ရဲ့ ရပ်တန့်-အရှုံး ကြိုတင်မှာယူသည်မှာသင်နှင့်သင်၏ ၂% ထက်မပိုသောအန္တရာယ်ကိုဆိုလိုသည် အမြတ်အစွန်း အမှာစာသည်အကျိုးအမြတ် ၄% ရသောအခါသင်၏အနေအထားကိုအလိုအလျောက်ထွက်သွားအောင်သေချာစေသည်။ ဤသည်မှာ Forex စျေးကွက်များ၌အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောအခါအချိုးအစားမှရရှိမည့်အကျိုးအမြတ်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အများဆုံး Forex လောင်းကြေး
သင်၏ဆိုလိုရင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြရန် - သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်တတ်နိုင်သလောက်အစုရှယ်ယာများသာလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှလူအများစုက ၄ င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်တွင် ၄ င်းတို့၏အကောင့်များထဲမှ ၁% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပမာဏသာသာသာကိုသာထည့်သွင်းကြသည်။
ဥပမာတစ်ခုပေးဖို့၊ မင်းမှာအကောင့်လက်ကျန်ငွေ ၂,၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုရင်ကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုတည်းမှာဆိုရင်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်အသုံးပြုဖို့အကြံပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပြုလုပ်သောကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သည်အတက်အကျရှိသည်။ သို့သော်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်ကိုယ်တိုင်သာဤမျှလောက်များပြားစွာရှယ်ယာလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏အကောင့်တစ်ခုလုံး၏မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းပစ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများမှာများစွာနည်းပါးသည်။
ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည် Forex စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများ
ဗျူဟာများအကြောင်း မပြောဘဲ Forex စျေးကွက်ကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မဆွေးနွေးနိုင်ပါ။ Forex Trade ၏ အတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကောင်းမွန်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် - အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန် နှင့် မည်ကဲ့သို့ အမိန့်ပေးရမည် ဖြစ်သည် - သင်သည် သင်၏ ကုန်သွယ်မှု ရည်မှန်းချက်များနှင့် သင်အသုံးပြုမည့် မဟာဗျူဟာကို အနည်းဆုံး စတင်ရန် စဉ်းစားချင်ပါလိမ့်မည်။ အတူ။
နည်းဗျူဟာနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းသို့သွားခြင်းသည်သင့်အားမှန်ကန်ပြီးကျဉ်းမြောင်းစွာနေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မ မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အသုံးများသောစာရင်းကိုအတူတကွထားပါတယ် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ တကမ္ဘာလုံး Forex စျေးကွက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လူများ တစ်ရက်ကုန်သွယ် Forex သည်ကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုတစ်ရက်ထက်နည်းသောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထားရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနေရာတစ်ခုကိုမိနစ် (သို့) နာရီအတွင်းပိတ်နိုင်သည်။
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုသည်များသောအားဖြင့်သြဇာ ရှိ၍ ကုန်သွယ်မှုမျိုးစုံဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ အမြတ်အစွန်းနည်းသော်လည်းကုန်သွယ်မှုအမြောက်အများဖြင့်အမြတ်အစွန်းနည်းသော်လည်းအရေးကြီးသည် - မကြာခဏဖြစ်သည်။ ဤကုန်သည်များသည်ညအိပ်ရန်ငွေကြေးကိုကျော်လွှားကြသည်။
Forex ဉီးခေါင်းရေ Forex ကုန်သွယ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားနည်းဗျူဟာများကဲ့သို့ကျွမ်းကျင်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ထို့ကြောင့်မကြာခဏအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကသာအသုံးပြုသည်။ ဤနေရာတွင်ရည်မှန်းချက်မှာကုန်သွယ်ရေးနေ့၌စျေးနှုန်းအတက်အကျအလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာနာရီပေါင်းများစွာအတွင်းအမှာစာများသိမ်းဆည်းခြင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အဆိုပါ namesake ဆိုလိုသကဲ့သို့ဤကုန်သည်များ ဉီးခေါင်းရေ တစ်ခုချင်းစီကိုအကွာအဝေးအတွင်း Forex pair တစုံကိုပြောင်းရွှေ့တစ်ခုချင်းစီကိုအလွန်သေးငယ်သောအမြတ်အစွန်း။
ဦး ရေပြားကိုအန risk တရာယ်နိမ့်ကျတဲ့နည်းဗျူဟာလို့ထင်နေကြဆဲပါ အမြတ်အစွန်း နှင့် ရပ်တန့်-အရှုံး အမိန့်။ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၎င်းတို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤအမြတ်သည်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုရက်သတ္တပတ်အထိအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်သည်။
Forex Swing ကုန်သွယ်ရေး
သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Forex ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် လွှဲကုန်သွယ် တစ် ဦး ပညာရှိ option ကို။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့လွှဲကုန်သွယ်မှုဟာနည်းနည်းလေးပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နဲ့ Forex စျေးကွက်ကိုရောင်းချင်တဲ့ရေတိုကုန်သည်တွေအတွက်ကောင်းပါတယ်။
Swing ကုန်သည်များသည်သူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုတစ်နေ့ (သို့) နှစ်ပတ်အတွင်း၊ တခါတရံတွင်လများများဖွင့်နိုင်သည်။ လွှဲအရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအကြောင်းရင်းမှာပန်းတိုင်သည်သင်ကုန်သွယ်နေသည့်အတွဲ၏နောက်ကိုလိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နာရီနှင့်လများကြာရှည်နိုင်သည်။
Forex Demo အကောင့်များ
သရုပ်ပြအကောင့်များကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ ၄ င်းတို့သည် Forex trading newbies နှင့် seasoned ငွေကြေးကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များသရုပ်ပြအကောင့်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်သင့်အားငွေကြေးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသော Forex market အတွင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကသာမကသင် demo ပိုက်ဆံကဲ့သို့စက္ကူရန်ပုံငွေများပေးလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုမကုန်မှီ Forex trading နည်းဗျူဟာအသစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲစျေးကွက်၏ကြိုးများကိုသာသင်ယူနိုင်သည်။
အချက်ပြခြင်းနှင့်အလိုအလျောက် Forex စျေးကွက်စနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်း
forex trading ပါ၀င်သော နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုနှင့် စျေးနှုန်းဇယားများကို နားမလည်သေးသူများအတွက် ဖြတ်လမ်းများရှိကြောင်း အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့မဟုတ် လုံလုံလောက်လောက် ဆုပ်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်သော အချိန်နှင့် စေတနာထားရုံမျှသာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤကိရိယာများကိုသင်မကြားရပါကဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်ပြခြင်း၊ မှန်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်စက်ရုပ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်သွားလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုများဖြင့် စတင်ကြပါစို့။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ၎င်းတို့သည် 'အကြံပြုချက်များ' သို့မဟုတ် 'အသံချဲ့ထွင်ခြင်း' ကဲ့သို့သော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ 'အစပျိုးမှုများ' များဖြစ်သည်။
၎င်း၏အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံတွင်၊ သင်၏ Forex စျေးကွက်အချက်ပြမှုသည် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်လိမ့်မည်-
သင်သည် GBP/USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
သင်၏အချက်ပြမှုကသင်နေရာချသင့်မသင့်ကိုပြလိမ့်မည် ဝယ်ခြင်း အမှာသို ရောင်းချ အမှာစာနှင့် ဘယ်တော့လဲ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းတွင်အကြံပြုထားခြင်းလည်းပါဝင်သည် ရပ်တန့်-အရှုံး နှင့် အမြတ်အစွန်း အဆင့်။
အချက်ပြပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီး၎င်းတို့သည်သင်မလိုချင်ပါကအခြေခံကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမလိုဘဲ Forex ဈေးကွက်တွင်ကုန်သွယ်ရန်သင့်အားကူညီသည်။
Forex အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုအသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Learn2Trade ၌ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာကိုလူသိများသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်သုံး x အခမဲ့အချက်ပြပါသည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Premium ၀ န်ဆောင်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့် (ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံနှင့်အတူ) သင်တစ်နေ့လျှင်အချက်ပြမှု ၃-၅ အကြားရလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် Forex အချက်ပြမှုများ ဒီမှာ။
အရောင်းအဝယ်ကြေးမုံ Forex Market က
၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူရန်ကုန်သည်များအားစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ layman ၏စည်းကမ်းချက်များအရမည်သည့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုမဆိုသင်၏ကုန်သွယ်မှုအစုစုတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင် forex ကိုအထူးပြုသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့၏အစုစု၏ ၀.၄% ကို AUD / USD နှင့် GBP / USD တွင် ၀.၃% ထိုးထည့်ပါကသင်၏အစုစု၏ ၀.၇% သည်ထိုနှစ်ခုကိုရည်စူးပါသည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူရန်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှာ eToro ဖြစ်သည်။ သက်သေပြနိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီရွေးချယ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အမှိုက်ပုံများရှိသည်။ သင်သည်သူတို့၏ stats ကိုရရှိလိမ့်မည် - ထိုကဲ့သို့သောပြန်လာ, ရှေးခယျြထား forex အားလုံးအတွက်နှင့်ပျမ်းမျှကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား။ ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀ သာမှသင်ကူးယူနိုင်သည်။
အတွက်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ် Forex Market က
Forex အလိုအလျောက်စက်ရုပ်များကို EAs (ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများ) ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် forex စက်ရုပ်တွေကမင်းကိုလုံးဝ passive နည်းနဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမှာပါ။
နောက်ထပ်ရှင်းပြရ ဦး မည် - အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော 'copy trader' feature နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်လူများကိုမှာကြားခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ အဲဒီအစား, အလိုအလျောက် algorithmic software ကိုသက်ဆိုင်ရာစျေးကွက် 24/7 scan နှင့်သင့်ကိုယ်စားအမိန့်ဝယ်နှင့်ရောင်း execute ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများအနေဖြင့်ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းကိုလိုအပ်ပြီးအခြားအချက်များကလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် EA ကိုအသုံးပြုသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအရာသာဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်တစ်ခု ဆုငှေ software သည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
တစ် ဦး အသုံးချဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Forex roboသင်၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပံ့ပိုးသူကိုရှာဖွေရန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင် software ကို download လုပ်ပြီး၎င်းကို MetaTrader4 ကဲ့သို့သော third-party provider တစ်ခုသို့ upload ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ပွဲစားသည်သဟဇာတဖြစ်အောင်သေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် MT4 တက်လက်မှတ်ထိုးမီ။ Forex စက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအာမခံချက်မရှိသေးပါဘူး။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိမရှိကိုသရုပ်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Forex Market အတွက်မှန်ကန်သောအွန်လိုင်းပွဲစားကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
သင်၏ Forex market အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုစတင်ရန်အတွက်သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပွဲစားတစ်ယောက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရာနှင့်ချီသော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပေးနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအချို့ရှိကြသည်။ အချို့သစ်တောများသည်သစ်တောများကိုကြည့်ရှုရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံး forex ပွဲစားကိုရှာဖွေသောအခါရှာဖွေရန်သော့ချက်ကျသောမက်ထရစ်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးရည်မှန်းချက်များမည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကောင်းကောင်းတွေးတောဆင်ခြင်ရန်၊ သင့်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာကိုရှာဖွေရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
အပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရသည့်ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအန္တရာယ်များမှသင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် အာကာသ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငွေဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာကအန္တရာယ်များတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါ။
တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများ FCA (Financial Conduct Authority) နှင့် CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) သည် အားလုံးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုနေရာ သန့်ရှင်းမျှတစေရန် ဖန်တီးထားပါသည်။
လိုင်စင်ရပွဲစားများသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပွဲစားများဒေ ၀ ါလီခံရလျှင်သင့်အနေဖြင့်ဘဏ္crimeာရေးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်သင်၏အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးခြင်းအပါအ ၀ င်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ယင်းအတွက် အကြောင်းရင်းမှာ စည်းမျဉ်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် မည်သည့်ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းသည် သင့်ဖောက်သည်၏ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှင့် ခွဲထုတ်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင် FX Pairs
သင့်အတွက်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုရှာသောအခါရှာဖွေရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်မက်ထရစ်သည် Forex အတွဲများကိုကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ Forex စျေးကွက်အတွက်ကုန်သွယ်ငွေကြေးအားလုံးအတွက်ဖုံးလွှမ်းထားပြီး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, 100+ ကျော် Forex အားလုံးအတွက်တည်ရှိမှုရှိနေစဉ်, ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတိုင်းကိုသင်တူညီသောစျေးကွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်ရှေ့သို့မသွားမီနှင့်အပြည့်အဝစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီသင်၌ရရှိနိုင်မည့်အရာများကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဥပမာ yUSD / MXN (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / မက္ကဆီကန် peso) ကဲ့သို့သောပေါ်ထွက်လာသောစျေးကွက်ငွေကြေးများပါ ၀ င်သည့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ကြံစည်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်သွယ်ရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးကသင့်ကိုတူညီတဲ့အတွဲတွေကမ်းလှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခကြေးငွေများကိုစစ်ဆေးရန်သိသာထင်ရှားသော်လည်းညအိပ်အောင်မြင်မှုနှင့်ဘဏ္promာရေးတူရိယာများ၏ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်၏ပွဲစားမှသင်ဖွင့်ပြီးပိတ်လိုက်သောနေရာတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာပေးမည်ဆိုပါက၎င်းကိုသင်၏အလားအလာရှိသောအကျိုးအမြတ်များသို့ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရုံသာမက ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ငွေရှာရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ Forex စျေးကွက်သို့ကော်မရှင်မှအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည့်အွန်လိုင်းပွဲစားများရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကော်မရှင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း (သို့) သင်၏အမှာစာတန်ဖိုး၏ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်ခြင်းထက်သင့်အနေဖြင့်ပြန့်ပွားမှုနှင့်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ထောက်ပံ့ပေးငွေပေးချေမှု Options ကို
ပွဲစားတစ် ဦး ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင့်စိတ်ကိုမထိမ်းသိမ်းမီ၊ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုမည်သို့ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်မည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Forex စျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သင်သည် (ပွဲစားမှ သတ်မှတ်သော အနည်းဆုံးပမာဏ) ကို သင့်အကောင့်ထဲသို့ အပ်နှံရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရစ်ကျလုပ်ငန်းအများစုသည် ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် လက်ခံသည်။ အချို့သော e-ပိုက်ဆံအိတ်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီဟာကသင်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမလွန်မှီသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းသည်လူကြိုက်များသော်လည်းသင်၏အကောင့် (၂-၃ ရက်မှ ၃ ရက်) အထိရောက်ရန်သတိရသင့်သည်။
အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံး Forex Market ပွဲစားများ
သင်ဤ Forex စျေးကွက်ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မှတစ်ဆင့်ဤအရာကိုဝေးစွာလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်၏ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုမည်သို့စတင်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ရှုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့၊ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပထမကမ္ဘာကငွေကြေးစျေးကွက်ကိုသင်ဝင်ခွင့်ရဖို့ပွဲစားရှာဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ပွဲစားများလည်းရှိသည်, ဒါကြောင့်အကောင်း, မကောင်းတဲ့နှင့်အရုပ်ဆိုးအကြား sorting စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအခြို့သောအင်တာနက် -based ခြေထောက်အလုပ်ကယ်ဖို့ - ကျနော်တို့အာကာသအတွင်းတက်ကြွထောင်ပေါင်းများစွာထဲကနေလက်ရွေးထိပ်တန်း Forex အရောင်းအဝယ်ပွဲစားများ5၏စာရင်းစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
၄။ AVATrade - တင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့နေသော Forex Market CFDs
AvaTrade တွင် ရွှေ၊ ငွေ၊ cryptocurrencies နှင့် forex ကဲ့သို့သော သတ္တုများ အပါအဝင် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် CFD အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤပွဲစားထံမှ ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုအား 1:30 တွင် အဓိကကျသော လက်လီကုန်သည်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက် 1:20 တွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စက္ကူရန်ပုံငွေများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရန်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားမှုနှင့်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ သင်က Forex trading ကိုခြစ်ရာကနေလေ့ကျင့်ချင်လား၊ ဒါမှမဟုတ်နည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ချင်လား။ - ဒါစံပြပါပဲ။
ဒီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှာ AveTradeGo လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီးအသုံး ၀ င်သည့်ကိရိယာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားပြီးသင်သွားလာရင်း Forex အတွဲများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင် MetaTrader စီးရီးကိုနှစ်သက်သူဖြစ်လျှင် AvaTrade သည်အပြည့်အဝ MT4 နှင့် MT5 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီပွဲစားကိုသင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့စတင်နိုင်ပါတယ်။
min သိုက် $ 100
၂။ Capital.com - ကော်မရှင်၏ကုန်သွယ်မှုကင်းလွတ်ခွင့် Forex Trading
ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ အခြားပွဲစားများကဲ့သို့ Capital.com သည် အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤဥပမာတွင်၊ သင့်အား FCA နှင့် CySEC စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများဖြင့် အကျုံးဝင်သည်
ဤပွဲစားသည် ဖောက်သည်များအား ကွဲပြားခြားနားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာဖြင့် ကော်မရှင်မပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေးကို ပေးသည်။ ရောင်းဝယ်နိုင်သော CFD တူရိယာများတွင် ကုန်စည်များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ဟုတ်ပါတယ် - Forex။ ကော်မရှင်မပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုအပြင်၊ သင်သည် သင်၏ Forex ကုန်သွယ်မှုများတွင် လွှမ်းမိုးမှုကို 1:30 အထိ အသုံးချနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ $100 ၏အစုရှယ်ယာ $3,000 အထိဖြစ်လာနိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Capital.com သည်စိတ်မပျက်သင့်ပါ။ ဒီရက်သည် (ရက်အနည်းငယ်ကြာသော) ဝါယာလက်လွှဲပြောင်းခြင်းမှ Skrill ကဲ့သို့သောအကြွေး / ဒက်ဘစ်ကတ်များနှင့် e-wallets အထိလက်ခံမှုအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံသည်။ ဤပွဲစားမှတစ်ဆင့် Forex ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်သင်၏အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၀ မျှသာရှိသည်။
သုည - ကော်မရှင်နှင့်အတူ Forex ကုန်သွယ်
FCA နှင့် CySEC စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်
Forex Market ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ပါ
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းတွင်ရှိသောသူများသည်များသောအားဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သျောလညျး, နှံ့နှံ့စပ်စပ်လမ်းညွှန်၏နာမ၌, ငါတို့သင်တို့ကို sign-up ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းရရန်ရိုးရှင်းသော 3- ခြေလှမ်းလမ်းလျှောက်အတူတကွပါပြီ။
Forex Market အကောင့်ဖွင့်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစား၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့် 'sign up' ခလုတ်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ ပုံစံအတိုတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဤအချိန်တွင်သင်၏အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင်၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဲ့သို့သောအစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသောဓာတ်ပုံ ID လိုအပ်သည်။ ပွဲစားလိုင်စင်ပေးသူများမှပြဌာန်းထားသော KYC စည်းမျဉ်းများအရယင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Forex အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းပါ
အခုသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးမှသင်ရန်ပုံငွေလိုအပ်တော့မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်နှင့် Forex ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ဘာမှမရှိတော့ပါ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်မျှမျှတတရိုးရှင်းပါသည်။
သင်ရွေးချယ်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံးငွေပမာဏကို (ရရှိနိုင်ပါသည်မှ) သွင်းပါ။ မင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုငွေသွင်းတာကိုဝါယာလက်လွှဲပြောင်းပြီးငွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ရက်အနည်းငယ်လောက်စောင့်ရမယ်။ ရရှိနိုင်ပါကသရုပ်ပြကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်၏ပထမဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှုကိုတင်ပါ
ယခုတွင်သင်အားလုံးသည်ငွေကြေးအကောင့်တစ်ခုဖြင့်တည်ထောင်ထားပြီဖြစ်သည်။ သင်သည် Forex စျေးကွက်တွင်စတင်စတင်နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော FX pair တစုံကိုရှာပြီးမှာယူရန်လိုသည်။
ဆုံးဖြတ်ပါ ဝယ်ခြင်း or ရောင်းချ - စျေးနှုန်းတက်သည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းမည်ဟု သင်ထင်သည်ပေါ် မူတည်သည်။
နေရာချပါ ကန့်သတ် မှာယူသည် /Market က အမှာစာ - သတ်မှတ်စျေးနှုန်းဖြင့် ချက်ခြင်းထည့်သွင်းပါ။
လီဗာကိုရွေးချယ်ပါ သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ပါ – leverage ကိုအသုံးပြုလိုပါက ရရှိနိုင်သည့်အရာများမှ အများအပြားကိုရွေးချယ်ပါ။
တည်ဆောက်သည် Stop-loss / အမြတ်ယူပါ အမှာစာများ - ကုန်သွယ်မှုမှ သင်၏အန္တရာယ်/ဆုလာဘ်ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ဤအမှာစာများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြင့်သင်၏မှာကြားမှုကိုအတည်ပြုပါ။ Forex စျေးကွက်တွင်သင်၏ပထမဆုံးကုန်သွယ်မှုသည်အောင်မြင်သောတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းသောကြွယ်ဝမှုကိုလွယ်ကူစွာရရှိပါက၎င်းသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၁% အောက်သာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတာဟာအန္တရာယ်မရှိဘူးလား။
အန္တရာယ်ကင်းစွာကုန်သွယ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေခြင်းအားဖြင့် - သင်လက်ျာခြေမအပေါ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
Forex ဈေးကွက်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းနည်းသောအမြတ်အစွန်းနည်းစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငွေကြေးများကိုလဲလှယ်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်ကိုအသုံးချဖို့ထင်ပါတယ် stop- ဆုံးရှုံးမှု နှင့် အမြတ်အစွန်းဥပမာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရာတွင်ကူညီနိုင်သည်။
အမှာစာများနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမည်သို့သွားနိုင်သည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် passive ပုံစံဖြင့်ကုန်သွယ်လိုပါကအရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုသို့မဟုတ် forex စက်ရုပ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အစနှင့်အထွက်များကိုလေ့လာရန်အချိန်မရှိပါက၎င်းကိရိယာများသည်ကုန်သည်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ဆုံးဖြတ်သည့် မည်သည့်ပွဲစားသည်မဆို၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ လိုင်စင်ကိုင်ထားသူတစ်ဦးနှင့် ဆက်ကပ်ထားရန် အကြံပြုပါသည်။ ASIC, FCA, သို့မဟုတ် CySEC ။
သင်စစ်မှန်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းသင်သိရုံသာမကသင်၏ငွေများကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ (သီးသန့်စာရင်းတစ်ခု) တွင်သိမ်းဆည်းထားကြောင်းကိုလည်းသင်သိသည်။
ငါ Forex စျေးကွက်အတွက်ဘယ်လိုကုန်သွယ်နိုင်သလဲ
Forex စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည် online forex ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်သူကိုတွေ့သောအခါ - sign up လုပ်ပါ၊ သင်၏ account ထဲသို့ရန်ပုံငွေထည့်ပါ။ နေရာချထားလိုက်သောအမှာစာသည်စျေးနှုန်းတက်မည်၊ ကျလိမ့်မည်ထင်သလားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Forex ပွဲစားတစ် ဦး သည်တရား ၀ င်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုင်စင်ကို ရှာဖွေခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော အစတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားဝင်ပွဲစားများသည် လိုင်စင်များအတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသို့ လျှောက်ထားကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြသကြသည်။ ဤပွဲစားများသည် သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေ ခွဲခြားခြင်းအပါအဝင် စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များတွင် အနည်းငယ်အမည်တပ်ရန် FCA၊ ASIC နှင့် CySEC ပါဝင်သည်။
ငါ Forex စျေးကွက်အတွက်ကုန်သွယ်လေ့ကျင့်နိုင်သလား?
ဟုတ်တယ်၊ ဖောက်သည်တွေကို demo account တစ်ခုကမ်းလှမ်းတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့သင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါစက္ကူရန်ပုံငွေကိုသုံးပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်တစ်ပြားတစ်ချောင်းကိုမစွန့်ဘဲ Forex စျေးကွက်နှင့်ခိုင်မြဲစွာချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။
သင် Forex စက်ရုပ်များဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုသည်စွန့်စားရမှုများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းသည်သင်မ ၀ င်ခင်စျေးကွက်တွင်ပညာပေးရန်အရေးကြီးသည်။ အချက်ပြခြင်း၊ သရုပ်ပြအကောင့်နှင့်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်ကိုသာကူညီလိမ့်မည်။
Forex စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နှိမ့်ချသောအမြင်တွင် Forex trading အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများသည် Skilling, Capital.com နှင့် eToro တို့ဖြစ်သည်။ AvaTrade နှင့် EuropeFX တို့သည်စူးစမ်းလေ့လာသင့်သည်။ သင့်တွင်တိကျသောစုံတွဲတစ်တွဲရှိပါကသင်စိတ်ဝင်စားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားထိုစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။